Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Aostralia » Resadresaka fanatanterahana: Ny fahasalaman'ny fiaramanidina Australia
Profesora Michael Kidd amin'ny sidina aostralianina
Tamin'ny resadresaka mivantana iray, Peter Harbison avy amin'ny CAPA - Center for Aviation, dia niresaka tamin'ny Profesora Michael Kidd, AM, izay Lehiben'ny polisy misahana ny fitsaboana ao amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana any Aostralia, mba hiresaka momba ny zava-mitranga amin'ny fahasalaman'i Aostralia sy ny indostrian'ny fiaramanidina.
Rahoviana no ho tonga amin'ny dingana fanaovana vaksiny i Aostralia raha amin'ny fomba fijery ara-pahasalamana dia tsy hanana ahiahy hitety an'izao tontolo izao ny olona?
Ny fitsangatsanganana dia voafintina mafy any Aostralia sy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao vokatry ny areti-mandringana.
Nivoaka ny vaksinin'ny vonjy taitra any Aostralia.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny valin'ny coronavirus COVID-19 teo amin'ny firenena sy ny sidina Aostralia manokana dia niresaka momba ity taona manakorontana ity ny Profesora Kidd.
Ny resadresaka dia manomboka amin'i Peter Harbison an'ny CAPA - Ivotoerana fiaramanidina, mampitandrina ny Profesora Kidd fa hataony mahazo aina izy. Vakio na henoy ny tenin'ny Profesora.
Ka hataoko antsasak'adiny eo ho eo ianao, hataoko tsy mahazo aina araka izay tratra ianao satria mijaly daholo isika. Fa ny tiako hifantohana amin'ny ankabeazany, Michael, mazava ho azy dia ny fomba fijerin'ny fiaramanidina. Betsaka ny olana hafa manodidina izay samy tsy azo antoka tanteraka ary misy koa somary azo antoka kokoa, fa angamba raha afaka manomboka amin'ny fiandrasana volana vitsivitsy aho dia tsy haiko hoe firy, amin'ny fotoana mety tsara ny fanaovana vaksiny. -zaraina roa any Aostralia ary iraisam-pirenena.
Naheno adihevitra be momba ny seranam-piaramanidina izahay milaza na hitaky ny hanaovana vaksiny ny olona rehetra na tsia, izay amiko dia somary somary mavesatra amin'ny lafiny maro, satria iray ihany, ampahany amin'ny dia ny fitsangatsanganana tanteraka, fa mieritreritra aho fa zava-dehibe kokoa ny manaparitaka ny ivelany sy ny miditra. Ary amin'ny dingana inona no ahatongavanay any Aostralia mankany amin'ny dingana fanaovana vaksiny izay hahatsapanao fa afaka ianao, amin'ny fomba fijery ara-pahasalamana, dia hahatsapa ianao fa "Eny, afaka mandeha mitety an'izao tontolo izao ianao." Inona avy ireo sakana amin'izany? Inona avy ireo fepetra amin'izany, ary haharitra hafiriana izany, araka ny eritreritrao, noho ny famitana efa antenaina ananantsika ankehitriny?
Eny, izany no fanontaniana sarotra be. Mazava ho azy fa efa manana olona ho avy any Aostralia isika avy any ampitan-dranomasina, saingy mazava ho azy fa takiana amin'ny quarantine amin'ny fahatongavany isika, ary manana olona miala any Aostralia miaraka amina fanalalahana hanao dia any ivelany. SAINGY Ny fitsangatsanganana dia mazava ho azy fa voafintina mafy ao Aostralia ary any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao vokatry ny areti-mandringana, ary tsy fantatsika tsara hoe hafiriana no hatao vao afaka miverina amin'ny ambaratonga mahazatra isika amin'ny dia. Mazava ho azy fa hanisy fiovana ireo vaksininy, saingy ny programa vaksinina, mazava ho azy, dia vao manomboka mihodina any amin'ireo firenena any ampitan-dranomasina. Nivoaka ny vaksinin'ny vonjy taitra any Aostralia. Vao nahazo ny fankatoavana avy amin'ny Therapeutic Goods Administration an'ny vaksinin'ny Pfizer izahay. Mbola eo am-piandrasana ny fatra voalohany amin'ny vaksinin'ny Pfizer ho tonga any Aostralia isika. Manantena izahay fa hitsahatra tsy handray ireo vaksininy ireo ny olona amin'ny faran'ny volana volana febrily izao, fa ny fivezivezena handrakofana ny olon-dehibe rehetra ao Aostralia dia andrasana hatramin'ny Oktobra amin'ity taona ity.
Ary, mazava ho azy, mbola tsy manana vaksinina nahazo alalana hampiasaina amin'ny ankizy izahay. Ny vaksinin'ny Pfizer dia azo ampiasaina amin'ny olona 16 taona no ho miakatra, saingy midika izany fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mametra ny isan-jaton'ny mponina sy ny isan-jaton'ny olona ho any amin'ny fiaramanidina izahay. Ny fantatsika momba ny vaksininy dia, avy amin'ny fitsapana ara-pitsaboana sy ireo angona hafa natolotra, manakana ny fivoaran'ny aretina lehibe avy amin'ny COVID-19 sy ny fahafatesana, saingy misy zavatra maro izay tsy fantatsika . Tsy fantatray raha vita vaksinina ianao raha mbola voan'ny COVID-19, tsy misy simptomatika, nefa mbola atahorana [tsy ho re 00:04:31] amin'ny olon-kafa. Tsy fantatray hoe haharitra hafiriana ny tsimatimanota azonao avy amin'ny fanaovana vaksiny. Tsy fantatray ireo olona voan'ny COVID-19, ary misy mihoatra ny 28,000 aostraliana sitrana tamin'ny COVID-19, tsy fantatray hoe mandra-pahoviana no hanombohana izany tsimatimanota izany amintsika.
Noho izany dia betsaka ny zavatra tsy fantatra amin'izao fotoana izao, saingy mazava ho azy, toy ny nitranga nandritra ny taona lasa nandritra ity areti-mandringana ity, dia mianatra bebe kokoa isan'andro isika, ary antenaina fa hihamazava ny zava-misy rehefa mihodina ny programa nasionalintsika ny volana ho avy, nefa koa rehefa mahazo traikefa bebe kokoa isika amin'ny zava-mitranga any ampitan-dranomasina ary indrindra any amin'ireo firenena izay namoaka vaksinina nandritra ny roa ka hatramin'ny telo volana lasa.